सपनामा नचिनेका महिलासँग यौनसम्पर्क भएको देख्छु । के भएको होला ? – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन २९, बुधबार २१:२९
करुणा कुँवर, मनोविद । म २७ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । यौन सम्बन्धमा रुचि भए पनि अध्ययनमा व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारण मेरी गर्लफ्रेन्ड पनि छैनन्, तर हप्ताको एक–दुई पटकजस्तो स्वप्नदोष हुन्छ । सपनामा आफूले चिनेका अनि नचिनेका महिलासँग यौनसम्पर्क भएको देख्छु । भोलिपल्ट सपनाका कारण मनमा छटपटी हुन्छ । यस्तो समस्या किन हुन्छ ? यस्तो समस्या यौन क्रियाकलाप नभएका कारणले हुन्छ वा मेरो जस्तो उमेरमा सबैलाई हुन्छ अथवा ममा कुनै मनोवैज्ञानिक असरका कारण यस्तो भएको हो ? -मिस्टर जी
स्वप्नदोषलाई अनुसन्धानकर्ताहरूको भाषामा नक्र्टनल इमिसन्स भनिन्छ र यो विशेष गरी उठ्ने समयमा हुन्छ । २०१४ मा प्रकाशित जर्नल ‘ड्रिमिङ’ मा उल्लेख भएअनुसार यदि पुरुषहरूको यौन सम्बन्ध वा हस्तमैथुनद्वारा स्खलन भएको छैन भने उनीहरूलाई नक्टर्नल इमिसन्स हुने सम्भावना बढी हुन्छ, तर यसो भन्दैमा यौनसम्बन्ध हुने पुरुषमा नक्र्टनल इमिसन्स हुदैन भन्नेचाहिँ होइन, तर ती पुरुषमा नक्र्टनल इमिसन्स भने कम मात्रामा हुन्छ ।
कुनै–कुनै अवस्थामा हार्मोनका कारणले पनि यस्तो हुन्छ । जस्तै २०११ को एक अनुसन्धानअनुसार केटाहरू जसको सेक्स हार्मोन कम निस्कन्छ उनीहरूले टेस्टोटेरिन हार्मोन खान थालेपछि पनि नक्र्टनल इमिसन्स हुने सम्भावना हुन सक्छ । नक्र्टनल इमिसन्स पुरुषसँग सम्बन्धित व्यवहार भए पनि यसो हुनुमा विभिन्न तत्त्व कारक हुन सक्छन् ।
तपाईंको कुराअनुसार तपाईंमा डर, चिन्ता जस्ता समस्या छ जस्तो देखिँदैन । हाल २७ वर्षको हुनुहुन्छ र अहिले तपाईंको उमेरका कारण स्वप्नदोषको अनुभव गर्नुभएजस्तो देखिन्छ । यदि लामो समयसम्म यस्तै समस्या कायम रहे विशेषज्ञको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ ।